हजार चोटि सोचेर बिहे गर्नुस् है हजुर « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : १५ असार २०७८, मंगलवार १३:३०
भन्छन् नि लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुँदैन तर सेनामा भर्ती भएको मान्छे, आज श्रीमतीका कारण पलपल रोइरहेको छु । रामेछापमा जन्मिएँ, हुर्किएँ । ०५८ सालमा सेनामा भर्ति भएर जिरी, भोजपुर, इटहरीमा जागिर खाँदै थिएँ । पाँच वर्षपछि पल्टनले सेकेण्ड लेप्टन क्लास कोर्सका लागि दुई नम्बर बाहिनी धनकुटा हिलेमा पठाउने निर्णय ग¥यो । गाडीमा जाँदै गर्दा भेटिइन् एक युवती । नदेखुञ्जेल कोहो कोहो ? देखेपछि माया मोह भनेझैं परिचय भयो तारामाया राईसँग । झापाकी, एकल महिला । म गाडीबाट उत्रिएर गुम्बा होटलमा बास बस्ने भएँ, उनी पनि त्यहीँ आइन् । त्यहाँ मन मात्र साटिएन । विवाह गर्ने निचोडमा पुग्यौं ।
यहीपछि मोडियो जीवनको रथ । पैसा कमाउन कसले चाहँदैन र ? उनैले प्रस्ताव गरिन् विदेश जाने । जागिर छाडें, पासपोर्ट बनाउन रामेछाप गएँ । विदेश जाने सबै प्रक्रिया उनैले चालिदिइन् । भिसा नलागुञ्जेलसम्म उनकै घर झापाको शरणामती–६ मा बसें, करिब ७ महिना । इराक, अफगानिस्तान अवैध थियो, त्यहाँ जानैपरे दुबईसम्मको भिजिट भिसा लगाएर जान सकिन्थ्यो । इराक जान उडेँ ०६४ सालमा तर पुगें अफगानिस्तान ।
संयोगले काम राम्रै पाएँ । नेटोमा आबद्ध रहेर काम गर्न थालेँ । फर्म फिलअप गराइयो । १ हजार ९० अमेरिकी डलर तलब थियो । हाम्रो हातमा हैन आफन्त जसको नाममा फर्म भरियो उसैको खातामा तलब आउँथ्यो । ०६४ सालबाटै उनको खातामा पैसा जान थाल्यो । सम्बन्ध राम्रै थियो । सन् ००७ सालदेखि ०१४ सम्म विदेशमै रहेँ । झण्डै एक करोड रकम पठाएँ । त्यो ठाउँमा कुन बेला मरिन्छ, ठेगान थिएन । श्रीमतीलाई स्वदेश फर्कन चाहेको सुनाए । उनले अहिले फर्कन पर्दैन भनिनन् यद्यपि म स्वदेश फर्किएँ । विदेशमा श्रम, पसिना बगाएको रकमले अब स्वदेशमै आनन्दको जीवन जिउँछु भन्ने कल्पना थियो । मैले विदेशमा कमाएको रकमले घर जोडिएको थियो । एउटा निजी विद्यालयमा लगानी गरिएको थियो । सम्पत्ति कहाँ छ भनेर सोधखोज गरेँ । अब उनी तपाईंबाट तिमी हुँदै तँ मा झरिन्, कोठा बन्द गरेर पिट्न पछि परिनन् ।
एक दिन घरमै बसिरहेको बेला उनको भाइ गजेन्द्रले मलाई हात छाड्यो । मुख हुँदाहुँदै हात किन छाड्ने भन्दा तँ नबोल् । मैले धेरैको लास गायब पारेको छु, तेरो पनि गायब पारिदिन्छु भन्यो । भनेर ठूलो हुनुभन्दा सहेरै सानो हुनु जाति भनेर सही बसेको थिएँ । सहनेको पनि हद हुन्छ । एउटा महिलाले कतिसम्म अत्याचार गर्दा श्रीमान्ले सहने त ? असैह्य भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर निवेदन हालेँ । त्यो निवेदन इलाका प्रहरी कार्यालयमा पुग्यो । आफ्नै घरमा श्रीमतीबाट कुटिँदा पनि न्याय पाइन । भाइबाट कुटिएको त सहेकै थिएँ, परपुरुषलाई ल्याएर मलाई पिटाइयो । त्यहाँबाट म काठमाडौं आएँ । पापी पेटको सवाल थियो । मसँग एक रुपैयाँ थिएन । फुपूको छोरालाई गुहारेर तरकारी बेच्न थालेँ बाटोमा ।
झापा छाडेर काठमाडौं आएँ तर टर्चर आउन छाडेन । दुःख गरेर खाइरहेको थिएँ । एक दिन उसले फोन गरेर– तँ कहाँ छस्, त्यहीँ आएर ठीक पार्छु भनिन् । काठमाडौं आएपछिे डिभोर्स मागिन् । मैले जवाफ फर्काएँ, ठीकै छ तिमीलाई म चाहिँदैन भने मलाई पनि तिमी चाहिँदैन तर मैले ज्यान दाउमा राखेर विदेशमा कमाएको सम्पत्ति मलाई चाहिन्छ । त्यसपछि उनी झापै फर्किइन् । पछि थाहा पाएँ, ०७५ भदौ २० गते डेढ बिघा जग्गा बेचेपछि उनले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेकी रहिछन् । किर्ते कागजात तयार पारेर ०७० पुस १६ मा नाता प्रमाणित गराएको पनि भेटियो । बिवाह दर्ता गरौं भन्दा मान्दै नमान्ने महिलाले के कसरी नाता प्रमाणित गरिन् ? मेरो जानकारीबेगर कसरी नाता प्रमाणित हुन्छ ? वडाका कर्मचारी, प्रतिनिधि कति पैसामा बिक्नुभयो ?
मुद्दा भदौ २९ गते दर्ता भएको, शरणामति–६ ठेगानामा म्याद गएको मैले जानकारी पाउने कुरा भएन, म काठमाडौंमै थिएँ । उनी आफैँले अदालतबाट आएको म्याद बुझे हस्ताक्षर गरिन् । पत्र बुझेको ३० दिनभित्र अदालतमा हाजिर भएर प्रतिउत्तर पत्र दायर गर्नुपर्ने थियो । २८ दिनपछि तारामाया राईकै वकिल डिकबहादुर बुढाथोकीले फोन गरेर भनेपछि पो बल्ल थाहा पाएँ ।
रामेछापबाट हान्निँदै झापा पुगेँ अदालतमा । एक दिन मात्र प्रतिउत्तर लेख्न समय बाँकी थियो । हतारहतार प्रतिउत्तर लेख्न लगाएर हालेँ । त्यसपछि तारन्तार तारामायाका अनेकन वकिलले टर्चर दिन थाले । नेपाल बार एशोसिएसन, झापामा त्यहाँबाट टर्चर दिने वकिलको नामसहित निवेदन दर्ज गराएपछि आउन बन्द भयो । बहिनीको घर झापामै थियो । उनकै घरमा बस्दा मलाई प्रहरी लगाएर उठाइयो र आरोप लगाइयो, श्रीमतीको पेन्सन पट्टा चोरेको । मैले प्रहरी चौकीमा पुगेर अनुनय विनय गरेँ म चोर हुँ भने प्रमाणित गरेर सजायँ दिइयोस् नत्र चोर आरोप लगाउनेलाई कारबाही गर्नुहोस् । मैले धरान जाऊँ, पेन्सन लिइरहेको छ वा छैन त्यसपछि हराएको नहराएको थाहा हुन्छ भनेर त्यहाँँको सइलाई जवाफ फर्काएपछि उनले पेन्सन खाइरहेको, पट्टा नहराएको जवाफ फर्काइन् ।
प्रहरी प्रशासन कतिसम्म भ्रष्ट भने, तारामायाको ठाडो निवेदनका आधारमा रातको ११ बजे गिरफ्तार गर्न मिल्ने तर म अन्याय परेको थाहा हुँदा पनि छलफलमा समेत राख्न नसक्ने ? महिला सञ्जालमा निवेदन हालें, त्यो सञ्जालको सचिव मेरै श्रीमती । के छलफल हुन्थ्यो, त्यहाँबाट के न्याय मिल्थ्यो ? अध्यक्ष वृन्दा दाहालले यस्तो निवेदनमा छलफल गराएको छैन भनेर तारामायालाई बचाउन लाग्नुभयो । श्रीमती तारामाया राप्रपाको जिल्ला सदस्य । त्यही राजनीतिक दबाबमा ममाथि चरम अन्याय भइरहेको छ । प्रेममा फसेर एउटा एकल महिलालाई सहारा दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो र विवाह गरेँ । त्यसपछि पैसा पनि राम्रो कमाएँ । पैसा कमाएकै कारण अहिले यस्तो भएको हो । सायद पैसा नकमाएको भए यी अन्याय भुक्तमान गर्नुपर्ने थिएन होला । यद्यपि, अझै न्याय मरिसकेको छैन, न्याय पाउँछु भन्ने आशा बाँकी नै छ ।
– तेजबहादुर भण्डारी
#विवाह गर्ने निचोड